Raha vao nifindra tany Meksika mba hiaina miaraka ny Meksikana mpiara-miasa aho dia nahita zavatra vitsivitsy izay manahirana ahy. Nisy ny olona ny fanehoan-kevitra, maneho ny te hahafanta-javatra aho raha tsy amin’ny toe-po maharitra amin’ny trano fisotroana iray hatramin’ny telo ora MARAINA ary nisafidy ny handeha an-trano ihany, fa namela ny mpiara-miasa ao ambadiky amin’ny fety aho tokony hiandry azy. Ny iray hafa dia waiters’ talanjona aho raha naka ny volavolan-dalàna any amin’ny trano fisakafoanana na fisotroana tsy famelana ny mpiara-miasa karama. Fa ny tena shocker-nitranga tamin’ny voalohany asa fanadihadiana. Izaho dia matoky ny momba ny fahaizana sy ny zavatra tsara vokatry ny fivoriana mandra-ny mpampiasa, ny vehivavy, no nanontany ahy raha toa ny vadiko nanaiky ny fanapahan-kevitra ny fananana a-ny — birao ny asa. Ny ambony izany eny, izy ihany koa no nanontany ahy izay te-hikarakara ny iray taona vavy aho raha ho any am-piasana toy ny fiambenana ny zaza raha nisy afa-tsy ny andraikitra.
Tsy ho ela aho dia nahatsapa fa, ao Meksika, ny maro mbola mino ny nentim-paharazana ny fizarana ny anjara toeran’ny vehivavy amin’ny lehilahy mitondra ny vola, vehivavy nanolo-tena raharaha. Araka ny fanadihadiana nataon’ny Fikambanana ara-Toekarena, ny fiaraha-Miasa sy ny Fampandrosoana, ao Meksika, afa-tsy dimy amby efa-polo ny vehivavy eo amin’ny faha enina ambin’ny folo, ary dia miasa (OCDE eo ho eo), mbola vehivavy hanao ny isan-jaton’ny tsy handraisam-bola ao an-tokantrano ny asa sy ny akanin-jaza. Taona taorian’ny tafatafa zava-nitranga, izaho mbola haka an-kolaka hafatra avy ny zanako vavy ny mpampianatra fa izaho ilay iray izay tompon’andraikitra noho ny zava-bitany any an-tsekoly ny vadiko dia eny ny lelam-pitana. Ny fanavakavahana sy ny tsy fitoviana Meksikana vehivavy ireo isan’andro ny olana. Maro ny vehivavy dia tsy mahazo mahita asa, na hahazoana fahaleovantena ara-bola satria misy ny mety ho azy ireo ny bevohoka. Ao ny sasany any ambanivohitra, ny vehivavy dia tsy navela mba hifidy na hifidy araka ny safidiny ny vadiny, ary tsy mbola ankizivavy izay tsy mahazo miditra an-tsekoly fotsiny, satria izy ireo dia vehivavy. Ny herisetra ihany koa ny olana lehibe amin’ny Meksikana amin’ny fiainan’ny vehivavy. Araka ny Ivotoerana Nasionaly momba ny Antontanisa sy ny Jeografia, mihoatra noho ny vehivavy mihoatra ny dimy ambin’ny folo taona, efa nijaly iray, fara fahakeliny, ny zava-nitranga ara-pihetseham-po, ara-nofo, ara-toekarena, sy ny herisetra ara-batana. An-Tanànan’i Mexico ny fitateram-bahoaka no atao hoe faharoa mampidi-doza indrindra ho an’ny vehivavy eo amin’ny dimy ambin’ny folo lehibe indrindra tanàna eto amin’izao tontolo izao ny vehivavy mpampiasa nitatitra ny fananana firaisana ara-nofo no nikasika na enjehina, raha oharina amin’ny sivy ambin’ny folo tany Londres. Mba hisorohana na hampihenana ny mety ho lasa lasibatry ny herisetra ara-nofo amin’ny toerana natao ho an’ny daholobe, dia nataony ho babo ny fohy, fohy zipo, akanjo sy akanjo amin’ny cleavage, ary lasa anisan’ny efa-polo ny vehivavy izay tia manao akanjo izay mahatonga azy tsy dia mahasarika mba hampihena ny loza. Nianatra aho fa tsy azo antoka ho ahy ny haka taxi irery, ka isaky ny mila mahazo toerana ao amin’ny maraina na tara amin’ny alina, aho misafidy ny Uber. Izany dia manome ahy fahafahana mandefa ny lalana ny mpiara-miasa, dia ho afaka manaraka ny hetsika tsikelikely mandra-mahazo ny toerana halehany. Ny ratsy indrindra dia, fa ny vehivavy no tompon’andraikitra amin’ny heloka izy ireo mijaly. Rehefa Mara Castilla, isan -taona ny mpianatra, dia nanjavona rehefa nandidy ny mitaingina Citify, manambany vehivavy kevitra nameno ny tambajotra sosialy, manome tsiny azy noho ny manana fahafinaretana miaraka amin’ny namana, mandihy miaraka amin’ny olon-tsy fantatra, nijanona tara ao amin’ny bar, izay voalaza fa mamo, ary handeha an-trano ihany, izay, araka ny hevitry ny olona, nitarika azy fanjavonana sy vono olona. Na dia eo aza ny faharatsian’ny toetry ny raharaha ho an’ny vehivavy ao Meksika, nisy hetsika sy ny fepetra mikendry ny fisorohana ny herisetra, ary mihena ny tsy fitoviana amin’ny lahy sy ny vavy. Bahoaka sy ny tsy miankina ny fitaterana mpanome tolotra ao CDMX sy ny hafa be amin’ireo tanàna Meksikana efa nampiditra maro no vahaolana mba hisorohana ny herisetra ara-nofo, toy ny vehivavy ihany ny lalamby fiara, nisaraka miandry ny faritra ao Metrobus toby, ary maika bokotra eo amin’ny lalana be mpandeha indrindra. Misy mihitsy aza ny fiara fitaterana miloko mavokely fa ny olona dia tsy afaka ny birao, ary Laud rive, ny vehivavy-tokana tsy miankina amin’ny fanompoana fiarakaretsaka. Raha misy ny sasany mihevitra ireo segregating fepetra tsy ampy sy tsy maharitra, ny vehivavy maro no mahatsapa ho azo antoka ny fampiasana azy. Nisy ihany koa ny fanatsarana eo sasany vondrom-piarahamonina vazimba teratany, indrindra ho an’ny vehivavy, izay teo anivon ny marefo indrindra mponina. Vehivavy teratany efa-tantara dia niaritra fanavakavahana telo sosona noho ny maha-vazimba teratany, ny mahantra, ary ireo vehivavy, miaraka amin’ny avo indrindra ny tahan’ny tsy fahaiza-mamaky teny, ny reny, ny herisetra an-tokantrano, sy ny fahantrana lalina. Tao anatin’ny taona vitsivitsy, ny vehivavy efa nanomana ho vondrona ny embroiderers mamorona sy mivarotra ara-drariny-varotra zava-kanto sy hahazo fahaleovantena ara-bola. Vehivavy teratany ihany koa vao tsy ela akory dia nahazo iray tsy nisy toa azy ny haavon’ny fanomezana hery ara-politika bebe kokoa sy kokoa ireo efa mandray anjara mavitrika ao an-toerana ny fifidianana toy ny kandidà ho solontena ao amin’ny filankevitry ny tanàna. Tamin’ity taona ity, nandritra ny fotoana voalohany eo amin’ny tantara Meksikana indizeny vehivavy dia nihazakazaka ho filoham-pirenena. Raha ny fanalan-jaza any Meksika dia voarara ary voasazy amin’ny ankapobeny, misy ireo fikambanana izay hanampy ny vehivavy hamarana izany vohoka tsy niriana izany, na ny manarona ny mandeha ny vola lany any an-Tanànan’i Mexico, ny hany toerana izay an-tsitrapo ny fanalan-jaza dia navela, na amin’ny alalan’ny fanomezana fanafody sy arahina nandritra ny dingana.
GIRE (ny Vaovao Vondrona amin’ny Fanànana Safidy) dia ny iray amin’izy ireo
Izany dia Meksikana tsy mitady tombom-barotra, ny fikambanana tsy miankina izay mampiroborobo ary miaro ny vehivavy ny zo ara-pananahana. GIRE dia manampy ihany koa ny vehivavy nandritra ny ady ara-dalàna eo amin’ny toe-javatra ny obstetric herisetra. Sinatra dia tanora syndicate miady mba hanatsarana ny loza miasa toe-javatra mihoatra ny roa tapitrisa ireo mpiasa an-trano. Araka ny Filankevi-Pirenena ho an’ny Fisorohana ny Fanavakavahana, ny mpiasa an-trano dia indrindra eo amin’ny firafitry nanavakavahan’ny firenena vaventy miasa vondrona: mihoatra noho ny vehivavy no tsy manana fahafahana miditra ara-pahasalamana, ny valo amin’ny folo tsy manana fiarovana ara-tsosialy, ary iray amin’ny dimy manomboka miasa eo anelanelan’ny folo sy. Be dia be ny azy ireo hiasa ho mihoatra noho ny roa ambin’ny folo ora isan’andro, ny andro enina ao anatin’ny herinandro, ho kely dia kely karama, ary ry zareo tsy tapaka baraka sy ny fampijaliana nataon’ny mpampiasa. Ho an’ny tsy miankina amin’ny fanjakana fanehoana, ny manan-danja indrindra ny fanatsarana ny ateraky ny vehivavy hirotsaka amin’ny politika noho ny fampiharana hentitra ny quotas mitaky ny mitovy fanehoana ny vehivavy sy ny lehilahy eo amin’ny lisitra kandidà amin’ny fifidianana. Androany, roa amby efapolo ny mpikambana ao amin’ny Antenimieran’ny Solombavambahoaka ao Meksika dia ny vehivavy, raha mitaha amin’ny OCDE eo ho eo amin’ny valo amby roa-polo ho ambany ny trano-pirenena mpanao lalàna.
Meksika ny tahan’ny ny fahatelo ambony indrindra ao amin’ny OCDE
← Lasa manohana ara-bola ho an'ny tovolahy. Ny vehivavy hanafaka ny lehilahy Mpitan-tsoratra amin'ny firaisana ara-nofo. Asa mpitan-tsoratra miaraka akaiky ny tolotra sy ny famintinana
Meksikana tombokavatsa: sanda roa-polo roa tattoo sary, sketches →